29 / 09 / 2021 29 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 381 Views စာ0မှတ်ချက် 40432 Minifigure, ၅၀၀၆၈၉၀ ပျံသန်းနိုင်သောကား, လက်ဆောင်, အခမဲ့လက်ဆောင်များ, GWP, Lego, Lego GWP, Lego ကမ္ဘာကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်, Lego စတိုး, Lego စတိုးပြက္ခဒိန်, အောက်တိုဘာလ, ကမ္ဘာကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်, စျေးဝယ်
နောက်ထပ်အသစ် Lego Rebuild the World ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လှုံ့ဆော်မှုကို minifigure ကနေပြီးပြည့်စုံတဲ့တည်ဆောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါပြီ။
ကမ္ဘာကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့အခါ ပထမဦးဆုံးအ 2019 အတွက်ဖြန့်ချိယုန်နှင့်ဖြတ်ကူးသောသေးငယ်သောပုံကိုသရုပ်ဖော်။ ထူးခြားသည့်အသေးအဖွဲရုပ်ပုံကိုပြုလုပ်ထားသည်။ တစ် ဦး အဖြစ် ပိုးအိစံ ဤအရာသည် ၄၀၄၃၂ Minifigure အားပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်တစ်ခုတည်းသောတရားဝင်ပုံစံကိုယခုအချိန်ထိလုပ်ခဲ့သည်။
p အဖြစ်art ၏ အောက်တိုဘာလကမ်းလှမ်းချက် တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်ရည်ရွယ်သည့်ဒုတိယပုံစံကိုယခုအကြိမ်တွင်ပျံသန်းရန်ကားတစ်စီးလုံးတည်ဆောက်မှုအပါအ ၀ င်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ 5006890 Flying Car သည်လေယာဉ်တောင်ပံနှစ်ဘက်နှင့်အပေါ်မှဆူးတောင်တစ်ခုပါသောခြောက်ထပ်ကျယ်ယာဉ်ကိုသရုပ်ဖော်သည်။
ပထမဆုံး Rebuild the World set အပါအ ၀ င် minifigure တစ်ခုထိုင်ရန်အရွယ်အစားသည်ပြီးပြည့်စုံရုံတင်မကဘဲရောင်စုံတည်ဆောက်မှုသည်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သည်ဟုထင်ရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကားကိုမီးကင်ရန်သုံးသော pretzel သည်အရသာရှိသောအလှဆင်ပစ္စည်းတစ်ခုတင်မကဘဲအခြားပုံစံတစ်ခုအနေနှင့်အစားအစာ၏ဗဟိုချက်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်မှ ၂၄ ရက်အထိတရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင် VIP အဖွဲ့ဝင်များအားစျေး ၀ ယ် ၅၀၀၆၈၉၀ ပျံသန်းသောကားတစ်စီးကိုအခမဲ့ပေးလိမ့်မည်။ Friends နှင့် CITY Polybag.
ဤကမ်းလှမ်းချက်များပြီးဆုံးပြီးနောက်တစ်ရက်သာစောင့်ဆိုင်းပါကသင်တို့နှစ် ဦး ကိုအမှတ်ရလိမ့်မည် ဟယ်ရီပေါ်တာ အစား၊ အစုံအပါအဝင် ဟော့arts အိပ်ဆောင် GWP.
← LEGO စတိုးများသည် arcade ဗီဒိုများရရှိပြီး၎င်းတို့သည်သင်၏ဂိမ်းများကိုပြသနိုင်သည်
Marvel LEGO minifigures များဖြင့် Spider-Verse ကိုပြန်လည်ပုံဖော်သည် →